ရင်ခွင်ပြောင်းတဲ့ နှင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ရင်ခွင်ပြောင်းတဲ့ နှင်း
Posted by Ma Ma on Mar 22, 2013 in My Dear Diary | 43 comments
ရာသီမဟုတ် နှင်း ရေးမိရေးရာ လက်စမ်းစာပေ
ဒီဇင်ဘာမွေးမို့လား မသိဘူး နှင်း ကို သံယောဇဉ်ရှိတယ်။ ခရေဇီဖြစ်တယ်။
နှင်းကျရင် ဘာလို့မှန်း မသိပဲ ပျော်တယ်။
ခုတော့ နှင်း ရေ နှင်းးးး ရေ ဆိုတဲ့ သီချင်းကို သတိရမိတယ်။
မတ်လ ၂၂ ရက်ဆိုတဲ့ ဒီနေ့မနက် ၅နာရီမှာ ခါတိုင်းလို အလုပ်သွားတော့ မြင်ကွင်းက မကြည်မလင်ဖြစ်နေတာကို သတိထားမိတယ်။
ဒါပေမယ့် မတ်လရောက်နေပြီဆိုတော့ နှင်းကျတယ်လို့ မထင်မိဘူး။
စည်ပင်ဝန်ထမ်းတွေ မနက်အစောကြီး လမ်းဘေးမှာ တံမြက်စည်းလှည်းနေတာတွေ့လို့ အမှိုက်အမှုန်တွေ လွင့်နေတာလို့ပဲ ထင်မိတယ်။
ဒါပေမယ့် လမ်းတလျှောက်လုံးမှုန်မှိုင်းနေတာဖြစ်ပြီး အေးစိမ့်စိမ့်အရသာကိုလည်း ခံစားမိလာရတော့မှ
ဒီအချိန် ဒီရာသီမှာ နှင်းကျတာ ထူးဆန်းနေလို့ သက်သေပြဖို့ ဓာတ်ပုံရိုက်တော့မှပဲ နှင်းကို ပေါ်လွင်အောင် ဘယ်လိုရိုက်ရမယ်မှန်းမသိတော့ အော်တိုကင်မရာကို ခလုတ်နှိပ်လိုက်တဲ့ပုံတွေနဲ့ပဲ ယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေ သက်သေပြလိုက်ပါတယ်။
မနက် ၆နာရီခွဲမှာလည်း မပီဝိုးတ၀ါး
ကိုရီးကားတွေ ရူးတုန်းက ပိုချစ်တယ်။
အညာမှာ နေရတော့ နှင်းဆိုတာထက် မြူတွေကိုပဲ အတွေ့များခဲ့တာ။
ကျနော် မိုးကုတ် မှာ မနက်စောစောမှ နှင်းကို မြင်ဘူးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခဏပါပဲ။
အေး ပုံများတော့ ရေကန်က ရေ အပေါ်ယံလေးတွေက ရေခဲချပ်လေးတွေကိုဖြစ်လို့။
နှင်းတောင်က နှင်းဖြူဖြူမျိုးတော့ ဘယ်အချိန်မှ မြင်ရတော့မလည်းမသိ။
နှင်းကျတဲ့ မနက်ခင်းအေးအေးလေးကို သဘောကျတယ်။
နှင်းတောင်က နှင်းဖြူဖြူလေးကို မြင်ဖူးချင်တယ်။
ဒါပေမယ့် သဂျီးတို့ဆီကလို လူဒုက္ခဖြစ်လောက်အောင်ကျတဲ့ နှင်းခဲကြီးတွေကိုတော့ မတွေ့ခင်ကတည်းက ကြောက်နေမိတယ်။ :harr:
ဒီနေ့ မနက်ခင်း နှင်းကျတယ် …
နေလို့ အရမ်းမိုက်တာပဲ …
ဒီလို မနက်ခင်းတွေဆို လွှတ်သဘောကျတယ် …
အမယ် … ဘေးချော်ပြီးတောင် စဉ်းစားလိုက်မိသေးတယ် …
ဒီနှင်းကြားမှာ တောင်မလေးနဲ့များ လျှောက်သွားလိုက်ရရင် … ဟီး ..
စိတ်ကူးယဉ် အိပ်ယာထဲမှာ ဖိတ်စာလည်းပါ …. :harr:
အဲ့လိုဘဲဂျ .. ဟီးးး
စိတ်ကူးနဲ့ပဲ ရဒါ …
ဂယ် လက်တွေ့ကျ စွံကို မစွံဒါ ….
ဒါ ရွာထဲက ဟိုလူဂျီးတွေနဲ့ ပေါင်းမိလို့ ဓါတ်ကူးတွားဒါ နေမှာ …
အော် ရင်ခွင်ပြောင်းတဲ့နှင်း ရင်ခွင်ပြောင်းတဲ့နှင်း…
ခေါင်းစဉ်းလေး လှလို. ၀င်ဖတ်တာ ပို.စ်တင်သူ ကို မကြည့်မိဘူး…. ပြန်ကြည့်လိုက်တော့.. အန်တီမမ ဖစ်နေဒါဂိုးးးးးးးးးးး ဟဲဟဲဟဲ
အဲလောက်လှတဲ့နာမယ် ကို ရိုးရိုးတော့ ပေးနိုင်ဟန်မတူဘူး…. နှင်းဇာတ်လမ်းတွေများ ရှိနေလားမသိ…
သင့်ခ် သင့်ခ် သင့်ခ် …….. ခိခိခိ
အချိန်အခါမဟုတ်ပဲ နှင်းကျနေတာကို ရေးဖို့ စဉ်းစားလိုက်တော့ ခေါင်းစဉ်က အလိုက်သင့်ပေါ်လာတယ်။
(တခါတလေ ပိုစ့်ရေးပြီးတာတောင် ခေါင်းစဉ်ရှာမရ ဖြစ်တတ်သေးတာ။)
ခေါင်းစဉ်ကို စိတ်ဝင်စားလို့ ၀င်ဖတ်တယ်ဆိုတော့ …
ငါ ကွ လို့ မြောက်ကြွကြွ ဖြစ်သွားပါကြောင်းးးးးးးးး :harr:
ဒီမနက် အေးနေတော့ အလာဂျီ ဖြစ်နေပြန်ရော .. နှာရည်ယိုရွဲပြီး ခေါင်းကိုက်နေပါကြောင်း …
မနေ့ကပြောတာ အလာဂျီး ကြားသွားပြီထင်တယ်။ :buu:
နှာရည်ယိုရွဲပြီး ခေါင်းကိုက်နေတယ်ဆိုရင် ပုဆိန်တံဆိပ်လေဆေးဆီကို ရှု့ကြည့် လိမ်းကြည့်ပါလား။
မနေ့ ကတည်းက စဖြစ်ပါကြောင်း ။ မောင်သက်ဆင်ရှင်နာဝပ် လေယာဉ် မထွက်နိုင်လို့ နောက်ကျသွားကြောင်းဖတ်လိုက်ရပြီး ဒီနေ့လည်း ၈ နာရီကျော်သည် ထိ ရန်ကုန်မြစ်ကြီးမှုန်မှိုင်းနေပါကြောင်း ။
ဆယ်အိမ်ခေါင်းရေ ဆက်စစ်ပါဗျို့ … :hee:
တရားမဲ့ စစ်ဆေးနေပါတယ်လို့ မီဒီယာကနေ အော်ပစ်လိုက်မယ်။ :harr:
အခုတော့ နှင်းပျောက်တာကြာပါကကော မမရေ
အရင်က ကြားဖူးတာ နှင်းပျောက်တဲ့ နွေ။
ခုတော့ နှင်းပျောက်တဲ့ ဆောင်း ဖြစ်နေသလားလို့။ :buu:
ဒီရက်ပိုင်း နည်းနည်းပြန်အေးနေလို့ ဖြစ်မှာနော်။
ကျွန်တော် တောင်ကြီးဘက်ကို အလုပ်နဲ့ရောက်တုန်းက
ဆောင်းကာလကြီးမှာ နှင်းကျတာကြုံဘူးပေမယ့် နှင်းနဲ့အတူ လေအေးတွေတိုက်တော့
ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာတာမို့ ဆောင်းတွင်းမှာတောင် ချမ်းစိမ့်စိမ့် အရသာကို မခံစားရတာ ကြာပေ့ါ။ :hee:
ရွာထဲမှာ အန်တီမမထက် နှင်းကြိုက်သူ ရှိသဗျား.. အသေရရ အရှင်ရရတဲ့။ ခလေးမအတွက် ရင်လေးတယ်…။
အသည်းမှာ “နှင်း” လို့ တင်စားကမ္ဗျည်းချယ်~~~~~~
ခုတော့ ယုန်ထောင် ကြောင်မိ သိလိုက်မိပြီ။
အနော် ဘာမှမသိပဲ သီချင်း ဆိုမိတာပါ ခင်ဗျာ။
မိထားတဲ့ ကြောင်ကိုပဲ ဆာတေးလုပ်ပလိုက်ပါ။ ခွိခွိခွိ
ဘာပဲပြောပြော သဲလွန်စတစ်ခုတော့ ရလိုက်သလိုပဲ။ :harr:
မနေ့ကနဲ့ ဒီနေ့မနက် နှင်းတွေကျနေတယ်…
မနက်က အာရုဏ်ဆွမ်းလောင်းပြီး နှင်းမှုန်တွေထဲမှာ
သဂျီးနေတဲ့ နှင်းကျတဲ့အရပ်ကို စရိတ်ငြိမ်းခရီး ကံစမ်းမဲလုပ်ပြီး ရွာသူားတွေကို မဲနှိုက်ခိုင်းဖို့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြရင် ကောင်းမလား။
ခုလောလောဆယ်တော့ ခါတော်မီပျက်လုံးအနေနဲ့ အချင်းချင်း နောက်ပြောင်နေကြတာ….
မိတ္ထီလာကို အခမဲ့စရိတ်ငြိမ်းခရီး ပို့ပေးမယ် ဆိုပဲ။ :eee:
ရာသီဥတု ပဲ ဖောက်ပြန်တာလား
မန်းမှာတော့ နှင်းပျောက်တာ ကြာပေါ့ဗျာ
တချို့ဆို နှင်းကိုမတွေ့ရရင် ယောင်ချာချာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း သီချင်း ဆိုနေလိမ့်မယ်။
သေခြာတာကတော့ အအေးပတ်ပြီးအလာဂျီ ဖြစ်နိုင်တယ်
ဟုတ်ပတော် .. သများမျက်နှာမှာခုဖြစ်နေပြီလေ စီထွင်းန်တော့သောက်ထားတာပဲ
သတ်ပုံဂိုဏ်းသားတွေ ရွာထဲမှာ အလစ်ပေးလို့ မဖြစ်ဘူး။
နှင်းခါးဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲ မသိဘူး။
နှင်းကျလို့ မြေအစိုဓာတ်ရပြီး သီးနှံအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းတယ်တဲ့။
တချို့ကတော့လည်း နှင်းခါးရိုက်လို့ ပန်းပွင့်တွေ ကြွေကုန်ပြီး သီးနှံပျက်စီးသတဲ့လေ။ :buu:
ဒို့ဘရာသာမိုက်လည်း နှင်းပုံပြင်ရှိခဲ့တယ် ထင်ပ့ါ။ :harr:
ပိုစ့်အဟောင်းတွေ ပြန်ဖတ်ဖြစ်လို့။ :hee:
Snow တွေ ဘုတ်ဘုတ်နဲ့..ကျနေတာကို အနုပညာဆန်ဆန် နာမည်လှလှလေး စဉ်းစားလိုက်တာ….
ဘုတ်ဘုတ်နဲ့ ကျတာဆိုတော့ နှင်းဖတ် လို့ :harr:
နှင်းဖတ်ဆို.. အရက်သောက်ရင်.. ထွက်တဲ့အဖတ်နဲ့.. ရောပြီးညစ်သွားမှာမို့.. စနိုး(Snow)ကို.. နှင်းပွင့်အဖြစ် အဆိုတင်သွင်းထားဖူးပါတယ်.. လို့..။
အကြောင်းမပြန်တဲ့အတွက်.. ဆိတ်ဆိတ်နေ၀န်ခံသဘောအရ.. သဘောတူတယ်သတ်မှတ်..အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်..။
Snow ကို နှင်းပွင့်လို့ အဆိုတင်သွင်းထားတာကို …
ထောက်လည်း ထောက်ခံပါတယ်။ :hee:
ဒါပေမယ့် သဂျီးက အနုပညာဆန်ဆန်လည်း ပြောသေးတယ်….
ဘုတ်ဘုတ်ဆိုပြီး မြည်သံစွဲကြီးကလည်း ပါသေးတော့……..
စိတ်ကူးထဲမှာ ပေါ်လာတာက နှင်းဖတ် ဖြစ်သွားတယ်။ :harr:
ဟေဟေ့ မြူထောင် နှင်းမိ ပါကွာ။
အခါလွန်တဲ့နှင်း လို့ ပေးလိုက်ပါ။
အောင်အတိတ် အောင်နမိတ်နဲ့ နှင်းးးးးးး တွေ ဝေပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်မယ်။ :hee:
ခင်ညွန့်ရည်ကတော့ ဟိုးဝေးဝေးကနှင်းလို့ ဆိုသွားတာဘဲ။
နှင်းကိုပြန်လွှတ်လိုက်ပါ နှင်းကိုပြန်လွှတ်လိုက်ပါတဲ့ ဘယ်သူ့အတွက်လဲတော့မသိဘူးဗျ
နှင်းဆမ်းသော ပန်း လန်းဆန်းတယ် လို့ ကြားဖူးတာပဲ :hee:
ဒီနေ့ 22 March 2013 မှာထူးထူးခြားခြားနှင်းကျရခြင်းကတော့ google ဥက္ကဌကြီးမြန်မာပြည်ရောက်လာခြင်းအထိမ်းအမှတ် နှင်းတွေက ကြိုဆိုခြင်းလို့ပဲ ထင်မှတ်မိပါတယ်။
အဲလို ဆက်စပ်တွေးကြည့်တော့လည်း အဟုတ်သားးးးးးးးးး
မင်္ဂလာပါ နှင်း လို့ နှုတ်ဆက်ရမယ်။ :hee:
အမငီး … အနော်တို့ ဆီတော့ နှင်းကျရင် အဆင်မပြေဘူးရယ် ..။
သွားရလာရတာ ဒွတ်ခရောက်လို့ ….
ခုရက်ပိုင်း နှင်းတော့ မကျဘူး မိုးတွေက တအုံးအုံး
ဟူး … အဆင်မပြေဘူး ..
ဆောင်းနဲ့ နှင်းကို ကြိုက်တာ အဲလို ဒုက္ခပေးတဲ့ ဆီးနှင်းရွဲရွဲ မိုးသည်းသည်းကိုတော့ မကြုံဖူးလို့ ဖြစ်မယ်။
ဒါပေမယ့် မောင်ရဲစိလည်း နေပူ မီးပျက် အခံခက်တဲ့ ဒီကနွေတွေကို ခံစားကြည့်ပါအုံးနော်။ :eee: